musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » IMEX America: New Corporate Focus chiitiko
Varongwa vemisangano yemubatanidzwa izvozvi vakawedzera mikana yekubatanidza uye nekugovana zviitiko panguva yeIMEX America munaNovember. Zviitiko zviviri zvakasarudzika zvichaitirwa pakuratidzira kunoitika munaNovember 9-11 muLas Vegas.
Nyowani yegore rino iCorporate Focus, yakavhurika kune vanoronga vemakambani pamatanho ese.
Ichave ichiitika musi weSmart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8, 2021.
Zvirongwa zvichagonesa nhaurirano dzakadzama pazvinhu zvazvino nezvinetso zvakaita sekutonga kwechikwata, dhizaini yemisangano, kutaurirana kunoshanda nevashandi vari kure, uye hutano hwepfungwa uye hutano.
Executive Musangano Foramu musangano wekukoka-chete wevakuru-vepamusoro makambani maneja kubva kumakambani eFortune 2000 uye - nyowani yegore rino - iri Kutarisana Kwekambani, yakavhurika kune vanoronga vemakambani pamatanho ese. Kutora nzvimbo paSmart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8 zvikamu zviviri izvi zvichagonesa nhaurirano dzakadzama nezvezvazvino matambudziko nematambudziko senge manejimendi echikwata, dhizaini yemisangano, kutaurirana kunoshanda nevashandi vari kure, uye hutano hwepfungwa uye hutano.
Misangano indasitiri veteran uye ane hunyanzvi mubatsiri Terri Breining achatungamira Executive Assembly Foramu uye Annette Gregg, Senior Mutevedzeri weMutungamiri, Chiitiko paMPI vachatungamira iyo nyowani Corporate Focus. Maumbirwo ezvikamu zviviri izvi anoitirwa kudzidza munharaunda, kukurudzira vanopinda kugovana nekuchinjana mazano munzvimbo isina kurongwa asi yakavanzika.
Carina Bauer, CEO weImEX Group, anotsanangura kuti: "Nepo chikamu chezviitiko zvebhizimusi iri nharaunda imwe chete, zvido zvemapoka akati wandei munharaunda ino zvakasiyana uye vanoronga zvemakambani havasi ivo vega.
“Takawedzera zvipo zvedu kune vanoronga makambani gore rino nekuparura Corporate Focus pamwe chete neExecutive Meeting Forum. Zvirongwa zviviri izvi zvinoshandira pamwe pamoyo pazvo, zvichipa mukana wekugovana maonero uye kugadzirisa matambudziko nenyanzvi nevezera kubva kumakambani pasi rese. ”
Iyo yekufemerwa Hub, imba kune yekuratidzira pasi dzidzo, inoenderera mberi yemubatanidzwa kuronga kurukurirano panguva yechiratidziro nechikamu chekudzidza: Nhaurirano yemubatanidzwa: Kudzoreredza zvine chinangwa kweindasitiri yezviitiko. Bob Bejan, Corporate Mutevedzeri Wemutungamiriri, Global Zviitiko, Production Studios & Kushambadzira Nharaunda, Microsoft naNicola Kastner, VP, Global Musoro weChiitiko Kushambadzira Strategic kuSAP vanozogovana zviitiko zvavo zvekufamba kuburikidza nedhijitari uye zviitiko zvemuviri, sarudzo uye mashandisiro emisanganiswa yemisanganiswa , zvakachinjwa tarisiro nezvido zvevatori vechikamu zvechiitiko uye zvinorehwa nekugadzirwa kwechiitiko.
Vatengi vekambani vanoverengera makumi maviri neshanu muzana evatengi zviuru zvitatu vakanyoreswa kuti vapinde IMEX America.
Executive Musangano Foramu kukokwa-chete kwevakuru-vepamusoro makambani maneja kubva kumakambani eFortune 2000. Kutarisana Kwekambani yakavhurika kune vanoronga vemakambani pamatanho ese. Ivo vaviri vanoitika kuIMEX America pa Smart Muvhuro inofambiswa neMPI, musi wa8 Mbudzi.
IMEX America inoitika 9 - 11 Mbudzi kuMandalay Bay muLas Vegas. Kunyoresa - mahara - tinya pano.